Otu esi etinye ngwa webụ Damn adịghị ike na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
October 30, 2021 August 2, 2021 by Jọshụa James
Ịdọ aka ná ntị! Ịdọ aka ná ntị! Ịdọ aka ná ntị! Ịdọ aka ná ntị!
Wụnye ngwugwu Git
Ịwụnye Apache, MariaDB na PHP maka DVWA
Na-ahazi MariaDB maka DVWA
Hazie SELinux na Firewall
Ịnweta na iji DVWA Weebụ UI
Ngwa Weebụ adịghị ike (DVWA) bụ a PHP na MySQL ngwa weebụ, ngwa weebụ adịghị ike na nke mepere emepe. Ebumnuche ya bụ inyere ndị ọkachamara nchekwa aka ịnwale nkà na ngwaọrụ ha na ọkwa siri ike dị iche iche iji nyere ndị mmepe weebụ aka ịghọta usoro nke ichekwa ngwa weebụ.
NDỌ AKA NA NT!! NDỌ AKA NA NT!! NDỌ AKA NA NT!! NDỌ AKA NA NT!!
Ebulitela ya na nchekwa HTML ọha nke onye na-eweta gị ma ọ bụ sava ọ bụla chere ihu na ịntanetị, n'ihi na a ga-emebi ha. Iji igwe mebere (dị ka VirtualBox ma ọ bụ VMware) ka akwadoro, tọọ na ọnọdụ ịkparịta ụka n'Ịntanet NAT.
Ngwungwu achọrọ: gaa
N'ime nkuzi a, ị ga-achọ itinye Git site na iji iwu a:
DVWA is PHP na dabere na MySQL ngwa. Maka nke a, ị ga-achọ ịwụnye Apache sava weebụ, MariaDB, PHP, yana ụfọdụ ngwugwu ndị ọzọ achọrọ. Iji mee nke a, jiri iwu njedebe a:
Ugbu a ị ga-achọ idezi PHP nhazi faịlụ (php.ini).
Nke mbụ, mepee faịlụ nhazi site na iji nano:
Na-esote, jiri chọta ahịrị ndị a (CTRL+W) ka ịchọọ n'okpuru:
Chekwaa faịlụ nhazi (CTRL+O), wee pụọ (CTRL+X).
Malitegharịa ekwentị Apache na MariaDB ọrụ na-eji iwu ndị a nke ga-emekwa ka ọrụ ndị dị na buut:
Ozugbo agbanyere, gosi na ọrụ abụọ a na-arụ ọrụ na iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ọrụ niile na-eji ọkwa ok na green, ị nwere ike ịga n'ihu na akụkụ nke nkuzi ahụ.
Ugbu a, ịkwesịrị ịmepụta onye ọrụ na nchekwa data iji jiri DVWA.
Nke mbụ, jikọọ na ọrụ MariaDB gị site na iji iwu a:
Ozugbo ejikọrọ gị, mepụta nchekwa data na onye ọrụ jiri iwu a:
Iji mechaa nhazi MariaDB, kpochapụ ihe ùgwù ma pụọ ​​​​na iji iwu a:
Iji budata DVWA, ị ga-eji Git iji mechie ebe nchekwa gọọmentị site na Github oru ngo.
Mechie ebe nchekwa ahụ site na iji iwu a:
Mgbe ịmechara cloning DVWA eji Git, gbanwee gaa na ndekọ ma detuo ihe nhazi nhazi:
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji iwu na-esonụ dezie faịlụ config:
Ị ga-edezi faịlụ nhazi ugbu a ka ọ dabara nkọwa nchekwa data gị wee mepụta a reCAPTCHA igodo:
Ka ịchekwaa faịlụ (CTRL+O), wee pụọ (CTRL+X).
Mara: Echefula iwepụta ihe reCAPTCHA ụkpụrụ na faịlụ nhazi site na iji Google ọrụ.
Akụkụ na-esote bụ ịtọ ikike onye nwe ya na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ Apache.
Tọọ ikike onye nwe ya site na iji iwu ọnụ ọnụ ndị a:
Iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ, malitegharịa Apache na MariaDB ọrụ iji tinye mgbanwe ndị a:
SELinux a na-ahazi na-akpaghị aka ma gbanye ya Nkume Linux 8. Dị ka o kwesịrị ịdị, nyere SELinux kwesịrị ichedo megide ihe iyi egwu, ị ga-achọ ịhazi sọftụwia nchekwa iji nweta DVWA.
Iji mee nke a, gbaa iwu na-esonụ iji hazie na SELinux:
Ugbu a, ị ga-achọ ịhazi firewall iji kwe ka ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri 80 na ihe ndị a:
Iji gosipụta mgbanwe ndị ị ga-achọ ịmalitegharị firewall, jiri iwu a:
Akụkụ na-esote bụ ịnweta Ebe nrụọrụ weebụ DWVA eji nke gi adreesị IP nkesa. Dịka ọmụmaatụ, nkuzi na-eji HTTP://127.0.0.1/setup.php ka edobere ya n’ebe dịpụrụ adịpụ Ime Ngwaọrụ. Ozugbo itinyere adreesị ahụ, a ga-ebuga gị na ibe na-esonụ:
N'okpuru ibe ahụ, pịa na Mepụta / Tọgharịa ọdụ data. Nke a ga-emepụta nhazi niile dị mkpa na nchekwa data gị wee duru gị gaa na ibe nbanye dị ka n'okpuru:
Mara, ndabara aha njirimara is (onye nchịkwa), na ndabara password is (paswọọdụ).
Tinye nkọwa wee pịa na Banye mkpọchi ka ịga n'ihu. Ị ga-abịa ugbu a na ihuenyo bụ isi dị ka n'okpuru:
Ọgbakọ, ị wụnyela Ngwa Weebụ adịghị ike (DVWA) gara nke ọma.
Na nkuzi, ị mụtara ịwụnye Rocky Linux 8 DVWA nke ị nwere ike ugbu a iji nwalee ngwa webụ gị ma ọ bụ ihe ọmụma nchekwa gị ma ọ bụ welie ntọala nkà gị n'ozuzu ya. Okwu ịdọ aka ná ntị dị ka mmalite nke ntuziaka, ịgaghị eji nke a na a mmepụta ihe nkesa dị ka a ga-emebi ya dịka ọdịdị nke ngwanro a.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na oru ngo Github peeji nke.